Fomba ahoana no hifidianana tanana amin'ny habeny?
Ny safidy amin'ny haben'ny sandry dia zava-dehibe tokoa, satria raha tsy mandray ny ati-doha ianao amin'ny fotoana mety dia mety hitranga amin'ny toe-javatra mampidi-doza ny fahasarotana mety hitranga. Ny "fahasimbana" ambony amin'ny saka tsy voafaritra dia mety ho lasa fandikana ny fampidiran-dra, ary, vokatr'izany, ny fisian'ny aretina.
Ny zatovovavy dia tsy tokony ho raisina ho zava-dehibe - mandritra ny fananganana ny vatana, dia tsy tokony havelanao hitafy tery ety sy mampiadana izany, satria mety hahatonga ny tratra ho kely izany.
Voalohany, ny fitsipika fototra amin'ny fisafidianana ny sandriny dia ny hino ny fihetseham-ponao fa tsy ny isa. Mandritra ny fikarakarana, mila mampihemotra ny tananao ianao, manongilana, manangona ny tananao sy ny andaniny, ary raha tsy mamihina ny fihetsikao ny rindrina ary tsy mitongilana, raha mbola mijanona ny lela - dia izao no habeny.
Fa ianao koa mila mahafantatra ny fomba fisafidianana ny halatra havanana, miankina amin'ny taratra manokana.
Izany no ilaina handrefesana:
fitondran'ny tratra - ilaina ny handrefesana ny fehikibo eo amin'ny teboka manondro ny tratra (ahazoana antoka fa eo amin'ny toerana milamina ny kasety);
girth eo ambanin'ny trast - mandrefy ny akanjo mivantana eo ambanin'ny tratra, izay matetika dia misy skeleton basy.
Ny fitomboana dia atao amin'ny brassiere iray, izay tsy mitombo na mihena ny tratra, ary koa tsy misy ny fiantraikan'ny pushap.
Fomba hisafidianana ny habeny mety amin'ny latabatra
Ny habetsaky ny basy dia aseho amin'ny isa maromaro sy taratasy iray, izay ilay tarehimarika no fehikibo eo amin'ny tratra, ary ny taratasy dia ny haben'ny kaopy, izay voafaritra amin'ny fahasamihafana eo amin'ny girth tratra sy ny akanjo eo ambany tratra.
Fomba ahoana no hisafidianana ny haben'ny siramamy silicone?
Rehefa voavaha ny fanontaniana momba ny akanjo sy ny girth eo ambany tratra, dia mitranga ny fanontaniana - ny fomba hisafidianana ny halehiben'ny tandroka, raha silikaly - dia tsy misy tady ary misy kaopy roa monja. Misafidiana mora kokoa toy ny mahazatra toy ny mahazatra toy ny kofehy tsy hita maso - mila mameno ny haben'ny kaopy fotsiny ianao, indrindra raha mety. Ny silikôna dia mifatotra amin'ny hoditra, ary ny kaopy dia miray tsikombakomba, ary noho izany ny akanjo eo ambany tratra dia tsy raisina an-tsoratra eto.
Vavy fotsy - inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Toe-damba fotsy hoditra
Boots with fur outside
Ahoana no hikorontana kiraro avo?
Sarafan fotsy - ireo modely tsara tarehy sy modely amin'ny fahavaratra
Miakanjo miaraka amin'ny soroka misokatra
Akanjo hariva amin'ny tanana lava lava
Ny akanjon'ny vehivavy ny akondro
Nihodina ny jaky
Ny moccasins an'i Baldinini
Fitiavam-boninahitra ho an'ny vehivavy feno
Down jacket-dress - iza no mandeha ary inona no akanjo jiro midina miaraka amin'ny akanjo lava?
Vato "Fitiavana an'Andriamanitra" - toetra mahagaga
Etazonia amin'ny loham-pianakaviana - amin'ny andro inona?
Famolavolana ny ovy eo amin'ny teknolojia holandey
Fehiloha koralika eo amin'ny tany
Duodenitis - Ny soritr'aretina sy ny fitsaboana
Fitsaboana fotodynamika amin'ny oncology
Fashion summer sarafans 2014
Grand Canyon an'ny UAE
Vary ho an'ny fanaka
Takelaka fanamboamboarana ho an'ny trano anatiny
Ahoana no fisafidianana takelaka parquet ho an'ny trano iray - toro-hevitra mahasoa ho an'ny fividianana fahombiazana
Fonosana karôta ao anaty multifariate
Ahoana ny fomba fihinana hena?
Edema amin'ny hodi-maso ambony - ny antony
Trondro eo amin'ny giro eo amin'ny giro
Tatoazy ao amin'ny toerana akaiky
Amin'ny inona ho an'ny panty hoditra 2015?
Fiainan'ny 9, izay hahatonga anao ho mpilomano amin'ny faha-60 taona
Fanafody kesika amin'ny fako saka